Azon’ny Rafitra Ara-pitsaràna Atao ny Manaraka Akaiky, ny Mampihena ny Loza Mety Hitranga, ny Miantoka fa Hahazo Rariny ireo Niharam-boina · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraMaria Julia Valdivia
Voadika ny 03 Jona 2018 17:49 GMT
Maria Julia Valdivia dia avy amin'ny #NiUnaMenosBolivia, fikambanana sivily iray ahitàna ireo mpirotsaka an-tsitrapo manome taridàlana sy fanarahamaso amin'ireo tranganà herisetra manjo ny vehivavy manerana ny firenena. Ity manaraka ity ny fanehoankevitr'i Maria Julia momba ny zavonteny ho an'ny teny hoe “feminicidio” (famonoana vehivavy).
Teny mibahan-toerana ao anatin'ireolahatsoratra 1.540 navoaka teo anelanelan'ny May 2017 sy May 2018 manondro ny “feminicidio” tanaty lahatahiry 2 an'ny Media Cloud , filazambaovao amin'ny fiteny espaniola ao Bolivia. (raha hanalehibe kokoa ny sary)
Taorian'ny fikarohana lalina [ireo zavonteny], dia heverinay fa ireto no teny izay tokony ho niasa matetika indrindra teny anaty fampahalalambaovao, na an-tsoratra io, na an-tsary ary na tany amin'ny onjampeo. Amin'ny ankapobeny dia tsy ireo no singa nampiasaina tamin'ny fijery ny lahy sy ny vavy ary ny herisetra. Inoako fa noho ny fandavantena sy ny fironantsaina tsy nihambahamba avy amin'ny fiarahamonina sivily, noho ny fisian'ny politikam-panjakana, ny finiavan'ny fanjakàna, ary ny tahirimbola natokana ho an'ny resaka fiarovana dia azo tiliana ny andrana ho famonoana vehivavy. Azon'ny rafitra ara-pitsaràna atao ny manaraka akaiky, ny mampihena ny loza mety hitranga, ny miantoka fa hahazo rariny ireo niharam-boina, ny fiarovana, ary miaraka amin'ny hafainganana mifandraika amin'ny fanamelohana, hatramin'ny fanolorantena hiantoka ny fisorohana io fihetsika maneho fanomezandanja tafahoatra sy fanjakazakàn'ny lehilahy io.
Ity dia ampahany amin'ny andian-dahatsoratra Rising Frames novolavolaina ho ampahany anatin'ny atrikasa nokarakarain'i Raisa Valda Ampuero avy ao amin'ny Warmi.Red sy Fabiola Chambi. Nanampy tamin'ny fanatontosana atrikasa natao ny 30 May 2018 tao Cochabamba, Bolivia izy ireo, izay namondrona hiaraka taminà toerana iray ny solontenan'ny vondrona sy vondrom-piarahamonina vitsivitsy mba handinika ny fomba hahatazànana azy ireo , na ny olana mampiasa loha azy, eny anaty fampahalalambaovao ao Bolivia ary hamorona tantara ho setrin'izany fahatazànana izany..
Oseania 12 ora izay
Afrika Mainty 13 ora izay
Karaiba 22 ora izay